Home » Vaovao momba ny indostrian'ny cruise » CDC dia manambara ny fitaritana ny fanamarinana ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo
Androany, ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) dia namoaka torolàlana ho an'ireo sambo fitsangantsanganana hanao dia an-tsambo miaraka amin'ireo mpandeha an-tsitrapo ao anatin'ny fampiharana COVID-19 Conditional Sailing Certificate.
Ny fisoratana anarana COVID-19 Conditional Sailing Sailing dia dingana farany alohan'ny famerana ny dia ataon'ny mpandeha.
Ireo mpandraharaha sambo fitsangantsanganana an-tsambo izao dia manana ny takiana sy ny tolo-kevitra ilaina rehetra hanombohana ireo dia an-tsehatra alohan'ny hanohizana ny dian'ny mpandeha voafetra.
Ny CDC dia hanohy hanavao ny torolàlana sy ny tolo-keviny hamaritana ny fenitra momba ny fiarovana sy ny fitsabahan'ny fahasalamam-bahoaka.
Miaraka amin'ny famoahana ireo antontan-taratasy ireo dia manana ny takiana sy ny tolo-kevitra ilaina amin'ny fanombohana ny dia an-tsambo alohan'ny hamerenany ny dia ataon'ireo mpandeha voafetra ny mpandraharaha sambo fitsangantsanganana. Ho fanampin'izany, ity famotsorana ity dia misy ny fangatahana taratasy fanamarinana COVID-19 Conditional Sailing Sailing, izay dingana farany alohan'ny dian'ny mpandeha voafetra.
Navoakan'ny CDC ny CSO tamin'ny Oktobra 2020 mba hisorohana ny fiparitahan'ny COVID-19 amin'ny sambo fitsangantsanganana, avy amin'ny sambo fitsangantsanganana mankany amin'ny vondrom-piarahamonina, ary hiarovana ny fahasalamam-bahoaka sy ny fiarovana. Ny baiko dia nanolotra fomba fiasa mifototra amin'ny famerenana ny fitsangantsanganana an-tsambo mpandeha hanalefaka ny loza mety hitranga amin'ny fanaparitahana COVID-19 an-tsambo.
Ny torolàlana anio dia manome torolàlana ara-teknika momba ny dia an-tsehatra. Anisan'izany ny: